30 igwe na ere ahia di iche iche n'uwa, did jirila nke a? -Comlọ ọrụ News-Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd.
30 igwe na-ere ahia di iche iche n'uwa, odi mgbe eji ya?
Echiche:51 Banyere chepụtara: Kwusaanụ Oge: 51 si:
I chere na enwere naanị nri nri na igwe a na-ere? Nke ahụ bụ nnukwu ndudue, cupcakes, sneakers, crabs, sịga, caviar, ọla edo… Naanị ihe a na-atụghị anya ya, ka a ghara ịchọta ya.
Ndị a bụ igwe na-ere ere 30 dị iche iche nke Business Insider na-anakọta ma kesaa gburugburu ụwa.
1. N’okporo ámá ndị dị na New York, Los Angeles na Dallas, e nwere awa iri abụọ na anọ nke cupcakes na-ere igwe. Nwere ike ịzụta kọfị na-atọ ụtọ dị ka chocolate marshmallows na kaadị akwụmụgwọ.
2. Enwere ike ịchọta igwe na-ere ihe maka crabs ntutu ọhụrụ na ọdụ ụgbọ oloko dị na Nanjing, China. Nke a bụkwa igwe na-ere ahịa na-ere ahịa na China, nke na-ere ihe dị ka 200 nshịkọ ndụ kwa ụbọchị.
3. Na Taiwan, ndị mmadụ nwere ike ịzụta ihe nkpuchi ahụike site na igwe na-ere ahịa, ọkachasị n'oge ntiwapụ nke influenza avian.
4. N'ọtụtụ akụkụ ụwa, gụnyere ụlọ nkwari akụ a na Abu Dhabi, enwerekwa igwe na-ere maka ọla edo.
5. Tinye mkpụrụ ego na igwe na-ere ahịa na Tokyo, onye dị adị ga-enyekwa gị swiiti. Agbanyeghị na ịzụ ahịa na akpaghị aka, ọ bụkwa ihe ọ pleasureụ.
6. Na Japan, ndị mmadụ nwere ike ịzụta kọfị mkpọ na igwe na-ere n'okporo ámá nke Suntory.
7. Echiche nke nhicha anụ ahụ na-apụta mgbe niile mgbe ị gara ụlọ mposi wee lelee onwe gị na enyo. Ọ bụrụ na ịnọ na Hollywood, California, ị ga-echigharịkwuru Proactive iji rụzie igwe na-ere ahịa.
8. Enwere ike ịchọta igwe na-ere ahịa akpaka maka mmiri ara ehi dị na etiti London, ebe ndị ọrụ ugbo na-agbakwunye mmiri ara ehi na igwe ahịa ma na-ere ya ozugbo site na ugbo iji zere mmachibido ire mmiri ara ehi na ụlọ ahịa ndị Britain.
9. yingzụta swiiti na igwe ahia nke Puerto Rico nwere ike ịnweta tube na-akwụghị ụgwọ nke ezé eze Colgate. N'otu oge ahụ, okwu ahụ "Echefula ịsacha ezé gị" ga-egosipụta na ihuenyo LED. Colgate na-ezipụ ozi ahụike n'ụzọ dị otú a.
10. N'ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo Vancouver, ị nwere ike ịchọta igwe na-ere ọgwụ na-a takingụ ọgwụ dị ka ebe ọrụ ọha na eze iji dochie ndị ochie iji gbochie mgbasa nke ọrịa.
11. Mgbe nyocha nkwado nke ụmụ akwụkwọ 85%, Mahadum nke Spensburg, Pennsylvania, webatara atụmatụ igwe B na-ere ọgwụ, yana ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ, dị ka Pomona College, na-asọ mpi ịgbaso usoro ahụ.
12. E debere igwe na-ere ego na kọmputa na Britain na cafe dị nso na obere Silicon Valley Technology Center dị na East London na Machị 2014. Site na igwe ahia a, enwere ike ịgbanwere Bitcoin maka ego akwụkwọ.
13. Na Los Angeles, ndị agụụ na-agụ nwere ike ịzụta mpịakọta mepere emepe dị njikere nke Mexico site na igwe mgbere maka $ 3, gụnyere sausaji ndị Spain, poteto achicha, anụ ezi mbụ, poteto na anụ amị.
14. companylọ ọrụ ahụ na-eme tortillas Mexico na-emekwa igwe na-ere Pizza na-eji oven iji mee Pizza nke anụ ọhịa 10 na 90 sekọnd.
15. Ugbo friji, mmalite mbido Chicago, na-etinye salads n'ime mkpọ akpọchiri ma ree ha n'igwe mgbere, bido na $ 8.
16. Brooklyn, New York, nwere igwe na-ere akpaka akpọrọ Swap-o-matic, nke na-enye ndị mmadụ ohere ịzụ ihe achọghị maka ndị ọhụrụ na-enweghị ego.
17. Na-arụ ọrụ nke ọkaibe karịa, igwe na-ere sịga a na-ere ihe ruru ụdị 25 dị iche iche nke ụtaba dị elu dị na $ 2 na $ 20.
18. Igwe na-ere caviar n’ụlọ ahịa Los Angeles na-efu ihe dị ka $ 5 na $ 500 otu ounce.
19. A na-ere Champagne na igwe mgbere na London. Epeepe ndị ahụ dị uru $ 29 otu kalama.
20. N'oge iko mba ụwa nke 2014, etinyere igwe na-ere ahịa akpaka na Sao Paulo Metro Station iji ree uwe ndị otu egwuregwu bọọlụ mba Brazil, na-enyere ndị na-anụ ọkụ n'obi aka.
21. Hangzhou, China, nwere igwe na-ere nnukwu mgbazinye obere. Ọ na-efu naanị yuan 3 kwa awa iji gbazite ụgbọ ala. Agbanyeghị na nnukwu ọsọ dị naanị kilomita iri ise, ụgbọ ala eletrik nwere ike ibelata mmetọ ikuku nke ụgbọala.
22. California, nke nwere ikikere ogwu wii wii, nwere igwe na-ere ahihia, nke di nfe dika izuta akpa nduku. Ọ na-efu $ 15 na $ 20 akpa ma nwee ike zụta ya mgbe awa ole na ole gachara nyocha.
23. Coca-Cola Spanish lemon ihe ọ juiceụ juiceụ ika Limon & Nad nwere ike zụrụ na agbanwe ahịa dị iche iche na mpaghara. Lemọn ihe ọ juiceụ juiceụ nwere ike zụrụ na-ere na igwe dị ọnụ ala karịa na ihu igwe ọkụ.
24. Na France, onye na-eme achịcha webatara ígwè ọrụ mgbere abụọ. Ndị na-akwado ya nwere ike zụta mkpanaka ọhụrụ maka awa 24 n'oge ọ bụla, ọbụlagodi n'abalị.
25. gba akpụkpọ ụkwụ ikiri ụkwụ dị elu maka oriri abalị nwere ike ịbụ ihe mgbu. Igwe na-ere ere nke na-ere akpụkpọ ụkwụ dị nro, nke dị mma na California na Las Vegas na-edozi nsogbu ụmụ nwanyị.
26. Iji kwalite ụbọchị ịgba ọsọ, akara egwuregwu akpụkpọ ụkwụ New Balance, yana mmekorita ya na Westin Hotel, butere igwe mgbere na-ere akụrụngwa anaghị akwụ ụgwọ (ọnụ ahịa $ 150). Ndị na-azụ ahịa kwesịrị ide na kọmputa ahụ n'ihu igwe na-ere ahịa site na Twitter: "Achọrọ m [email protected]# Runbọchị na-agba ọsọ mba ".
27. Amazon, bụ nnukwu e-commerce, abanyekwala n'ahịa igwe ahịa, na-edozi igwe ọkụ na-ere ọkụ na McCarran Airport dị na Las Vegas iji ree ndị na-agụ akwụkwọ e-e-akwụkwọ na ngwa ndị njem na-enweghị ntụrụndụ.
28. igwe anaghị ere ihe ọhụrụ. Na 1949, enwere igwe na-ere anwụ na-acha uhie uhie, na 30 sekọnd nke ịgba na-akwụ naanị 1 cents.
29. Onye ọchụnta ego Philadelphia bụ Marvin Kilgore gbazitere igwe ọrụ iri anọ iji ree ntutu mmadụ maka nnata ntutu ụmụ nwanyị, ọnụ ahịa dị n'etiti $ 40 na $ 60 otu.
30. companylọ ọrụ dị na Turky ewepụtala igwe na-ere ahịa akpaka na-ere ahịa karama maka nri nkịta na mmiri. Mgbe etinye karama plastik n'ime igwe, nri nkịta na mmiri ga-agbapụta iji nyere nkịta ndị na-akpafu akpafu aka. Zoomgu na eme oru OEM nke igwe eji ahaziri,
site na ihe osise iji mepụta mmepụta,
mgbe ahụ na mmepụta ihe, yana mmepe mmemme, nkwụsị,
ọdịdị mma, igwe ọrụ,
anyị ga-enye ọrụ ịkwụsị ọrụ.
Enwere ike ịhazi igwe niile na Zoomgu
Nke mbụ: Kedu otu esi ahọrọ igwe mgbere?
Ọzọ: Manlọ ahịa na-enweghị isi, kedu nsogbu ụlọ ọrụ ndị nwere akara kwesịrị ị attentiona ntị!